यीनै हुन् तामाका मुनाजस्ता देखिने अबोध बालवालिकासहित मारिएका ६ जना कार्की परिवार – Classic Khabar
September 7, 2021 123
ढुं’गामाटोको घर, सामान्य आर्थिक अवस्था। अकल्पनीय दुःखद् र बी भ,त्स ह,’त्या। एकै परिवारका ६ जनाको ह,’त्याले सिंगो गाउँ त्रसित छ। संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोलागाउँका बौदमान कार्कीको परिवारका ६ जनाको वी भ त्स ह,’त्या भएको छ। सोमबार बिहान घरभित्र र नजिकै परिवारका सदस्यको श,व फेला परेको छ।
‘घटना रहस्यमय छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लालध्वज सुवेदीले भने। बौदमानका ५८ वर्षीय छोरा तेजबहादुर कार्की गम्बुट लगाएकै अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। सोही घरमा रहेका ८५ वर्षीय बौदमान भने सकुशल छन्। उनी कान कम सुन्ने र आँखा पनि धमिलो देख्छन्। बौदमानकी ८४ वर्षीया श्रीमती पार्वता कार्की भने मृ त भेटिएकी छन्।
तेजबहादुरकी ५२ वर्षीया पत्नी कमला र ३२ वर्षीया बुहारी रञ्जना कार्कीको शव घर नजिकैको खोल्सामा भेटिएको थियो। ११ वर्षीय नाति दिपेन र ७ वर्षीया नातिनी गोमाको श,व घरमाथिको खरबारीमा भेटिएको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले बताए। मृ,तक सबैका श,व घरबाट सय मिटरको आसपासमा भेटिएका थिए। काम गर्न जाँदा लगाउने लुगा लगाएको र गम्बुट, चप्पलसहित भएकाले उनीहरूको ह,’त्या बिहान वा बेलुकीको समयमा भएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। गम्बुट र चप्पल लगाएकाले भाग्दाभाग्दै उनीहरूको ह,’त्या भएको प्रहरीको अनुमान छ।
वडा–१ का वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवालले ५/६ जनाको ह,’त्या भएको भन्दै बौदमानका छिमेकीले आफूलाई फोन गरेको जानकारी दिए। ‘यहाँ चाँडो आउनुहोस् भनेर फोन आउँदा मलाई पत्यार नै लागेको थिएन,’ उनले भने। वडाध्यक्ष कटुवाललाई बिहान ९ बजेतिर फोन गर्ने बौदमानका छिमेकी लक्ष्मीभक्त कार्की थिए।
‘कृषि पेसामा आबद्ध सामान्य आर्थिक अवस्था भएको परिवारको ह,’त्या किन गरियो भन्ने आँकलन गर्नै सकिएन, लक्ष्मीभक्तले भने। ह,’त्यापछि गाउँ नै त्रसित रहेको उनले बताए। सकुशल भेटिएका ८५ वर्षीय बौदमान आइतबार साँझ खाना खाएर सुते। बिहान उठेर हेर्दा कोही नदेखेपछि खोजी गर्ने क्रममा बौदमानले सबैभन्दा पहिले श्रीमतीलाई मृ,त भेटे। त्यसपछि उनले छिमेकीलाई खबर गरेका थिए। छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि बिहान ११ बजेतिर प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। घरबाट ५ मिनेट टाढा छिमेकी रहे पनि बिहान मात्र घटनाका बारेमा जानकारी पाए।
वृद्धकी श्रीमती पार्वता कार्कीको श,व घरैभित्र भेटिएको थियो। परिवारका अन्य ५ जनाको श,व भने यत्रतत्र छरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना रहस्यमय भएकाले थप अनुसन्धान गर्न संघीय प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल नेतृत्वको टोली घटनास्थल आइपुगेको छ। डीएसपी सुवेदीले भने, ‘घटना हेर्दा भाग्ने क्रममा ह,’त्या गरेको जस्तो देखिन्छ।’
तेजबहादुरका दुई छोराहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। जेठो छोरा रमेश र नरेश दुवै मलेसिया छन्। रमेशकी श्रीमती रञ्जनाको ह,’त्या भएको छ। नरेशकी श्रीमती मुना भने झापामा बस्छिन्। ‘धन कमाएर परिवार चलाउन विदेश गएका छोराहरूलाई अब हामीले कसरी खबर सुनाउने ?’ छिमेकी लक्ष्मीभक्तले पीडा सुनाए, यो परिवारको छरछिमेकका कसैसँग झै–झ,गडा पनि थिएन। मिजासिला थिए। यो त रहस्यमय घटना भयो।’
तराईमा जग्गाको बैना गरेर बौदमानको परिवार जग्गापास गर्न जाने तयारीमा थियो। जग्गापास गर्न लागेको खबर पाएकाले घरमा पैसा राखेको हुन सक्ने आ,शंकामा उनीहरूको ह,’त्या भएको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ। तीजपछि उनीहरू तराईमा जग्गापास गर्न जाने तयारीमा रहेको मृतकका आफन्तले बताए। -याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
Prevएमसीसी पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको नीति, गठबन्धनमा देखियो गडबड
Nextआखिर के नै रहेछ र जिवन ? आमालाई एक्लै छोडेर गए सिद्धार्थ, जो विना एक सेकेण्ड पनि बस्न सक्दैनथे !
९४ वर्षकि यी बुढी आम जो भुत घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ, रातभरि भुतले तर्सार खपिसक्नु पार्दैन (भिडियो हेर्नुस्)
अब मोबाइलबाटै ट्राफिक जरिमाना भुक्तानी गर्न सकिने